EX - ABSDF: မရေးချင်တော့တဲ့ ဒိုင်ယာရီ
ဗန်းမော်မန်ဝိန်းကြီးလမ်းနံဘေး “စိန့်ပက်ထရစ်”ဘုရားကျောင်း နံဘေး၊ ဆမ်မိုင်အမည်ရှိ(၁၄)နှစ်အရွယ် (၇)တန်းကျောင်းသားလေး။ ရေခဲအောင်ချမ်းလွန်း၍ အနွေးထည်လိုချင်၊ တောထဲမှာ သစ်ခွ ရိုင်းတစ်မျိုး တစ်ပိဿာ ခုနှစ်သောင်းပေးဝယ်သူရှိ။ အနွေးထည် ၀ယ်ရန် သစ်ခွခူးရောင်းဖို့တောထဲသွား အုန်းခနဲ့ မြောက်တက် သွားပြီးနားတွေ ကန်းကုန်။ သတိရလာတော့ ခြေတစ်ဖက် မရှိတော့။
ရှမ်း/မြောက်ဒေသ ဟိုက်ပါ-၀မ်ဟိုင်းက စစ်ရှောင်စခန်းရှိ ကလေးများထံပို့ရန် ကစားစရာအရုပ်များ အလှူခံ၊ ကလေး မလေးတစ်ဦးက သူ့မောင်လေး ယူလာသည့် ကစားစရာ သေနတ်ကို တွေ့သော်ထိတ်ထိတ်ပြာပြာ အိတ်ထဲပြန် ထည့်ရင်း သူ့မောင်လေးကိုပြော“ တခြားအရုပ်တွေပဲပေး၊ သေနတ်တော့မပေးပါနဲ့ မောင်လေးရယ်။ ”
ဟိုက်ပါ-၀မ်ဟိုင်းမှ စစ်ရှောင်ကလေးတွေ၊ လက်ဆောင် အရုပ်တွေရသွားလို့ ပျော်နေကြ၊ သူတို့အတွက် အားပေး တဲ့စာ၊ မိတ်ဖွဲ့စာတွေတွေ့လို့ ၀မ်းသာနေကြ။ ဘယ်က လာပို့တာလဲမေး။ ရန်ကုန်ကလို့ ဖြေတော့ - “ရန်ကုန်မှာ စစ်မတိုက်ကြဘူးလား”လို့ ထပ်မေး။
ပြည်မ,မြို့ကြီးပေါ်က ကလေးတွေက ရေးတဲ့စာထဲမှာ “ စိတ်ဓာတ်မကျနဲ့ သူငယ်ချင်း၊ ငါတို့အရုပ်လေးတွေ ဖက်အိပ်ပြီး အိပ်မက်ထဲမှာ မိသားစုနဲ့ ပျော်ရွှင်ပါစေ၊ အိမ်ကိုအမြန်ဆုံးပြန် ကျောင်းတက်နိုင်ပါစေ ” တဲ့။ စစ်ဘေးရှောင်စခန်းက ကလေးက ပြန်ရေး “ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် .. ငါလည်း ကျောင်းတက်ချင်တယ်”
“ သူငယ်ချင်းရေ အရမ်းချမ်းနေသလား ။ ငါ့အနွေးထည် ထည့်ပေးလိုက်တယ်။ မချမ်းပါနှင့်တော့ကွာ တက္ကသိုလ် ရောက်ရင်တွေ့မယ်နော်” ဘုန်းထွဋ်ခေါင်(ပြည့်လျှံဖြိုး) တတိယတန်း(H)၊ အထက(၁)ဒဂုံ . သူငယ်ချင်း ဘုန်းထွဋ်ခေါင် “ မင်းပေးတဲ့လက်ဆောင် ငါရပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါ တယ်ကွာ၊တက္ကသိုလ်ရောက်ရင် တွေ့မယ်နော်။ ” - စိုင်းဆိုင်လီ မူလွန်၊ ဟိုက်ပါကျေးရွာ။
လုံးခင်းရှိ စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကလေးတွေ အစာစားနေ။ ပြောင်းကြမ်းကို ဓားနဲ့ခြစ် ပြုတ်ရည်ကျဲကျဲ ကလေးတစ်ယောက်က သောက်နေရင်း မော့ကြည့်။ သူ့မျက်လုံးတွေက အရောင် မတောက်။
ကလေးနို့တိုက်နေ တိုင်းရင်းသူတစ်ယောက်ကိုမေး - “ အိမ်မပြန်ချင်ဘူးလား။ ” “ ပြန်ချင်တာပေါ့၊ သူတို့ခဏခဏ ရန်ဖြစ်တယ်လေ၊ ကြောက်စရာကြီး။ သေကြတယ်၊ မီးလောင်ကုန်တယ်လေ၊ ရန်မဖြစ်ဖို့ပြောပေးလို့ရမလား”တဲ့။
တော့ဆန်ကျေးရွာအုပ်စုအားလုံး ကျောက်မဲကို ထွက်ပြေး လာကြ။ ညဘက်မီးရောင်မြင်ရင် ပစ်မှာစိုးလို့ ထော်လာဂျီကို မီးမှိတ်မောင်းတော့ ချောက်ထဲထိုးကျပြန်။ ကျောက်မဲက ဘုရားရင်ပြင်ပေါ် စာကျက်နေတဲ့ ကလေးတွေ ဆယ်တန်းက ဘယ်မှာဖြေရမှန်းမသိ။ . “ တော့ဆန်”အထကမှ ဆရာ/ဆရာမတွေထွက်မပြေးဘဲ တပည့်တွေနဲ့ အတူလိုက်လာ စစ်ရှောင်ဇရပ်တွေမှာပဲ စာသင် ပေးနေ။ ကျောက်မဲစာစစ်ဌာနစာရင်းထဲ သူတို့ကို ထည့်ပေး လို့ရမလား။ မရေရာလှတဲ့ အခြေအနေမှာ ကလေးတစ်ယောက် လွှတ်ခနဲမေး။ “ စာမေးပွဲပြီးမှ စစ်တိုက်လို့မရဘူးလား ” *-*-*- ဖားကန့်မှာ ညရောက်တော့ တစ်မြို့လုံး အိမ်ရှေ့လမ်းတွေပေါ် ရောက်နေကြတာတွေ့ရ။ လူတွေသာမက ခွေးကလေး၊ ကြောင် ကလေးတွေပါ ထွက်လာနေကြ။ “ အခုမှ တိုက်ပွဲရပ်သွားတာကိုး အရင်ရက်တွေက အိမ်ထဲမှာပဲ ပုန်းနေကြတာလေ၊ အခုမှအသက်၀၀ ရှူနိုင်တာကိုး”ဟု တစ်ယောက်က ရှင်းပြ။ ကလေးတွေလည်း ခုမှ လမ်းပေါ်ပြေးလွှားကစားခွင့်ရ၍ ပျော်နေကြဟန် ကလေးတစ်ယောက်က ဘောင်းဘီလေး မ,တင်ရင်း ငြင်း.. “ ဟေ့အေး... စစ်တိုက်တမ်းတော့ မကစားဘူးကောင်ရေ့”။
- #မင်းကိုနိုင် [ ယနေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာပါ ဆောင်းပါးမှ ]